October 8, 2021 – Shwe Myanmar
“ဘုနျးတျောကွီးသော ရှတေိဂုံဘုရားအား စောငျ့ရှောကျသော နတျနှငျ့ဘီလူးမြား”
ရွှေတိဂုံဘုရားသည် ဘုရားလေးဆူတို့၏ ဓာတ်တော်မွေတော်များရှိပြီး လွန်စွာတန်ခိုးကြီးလှ၏။ ရှေးခေတ်မင်းအဆက်ဆက်တို့ ကိုးကွယ်ခဲ့ကြပြီး အဖိုးမဖြတ်နိူင်သော ဌာပနာများကိုလည်း ထည့်သွင်းခဲ့ကြလေသည်။
တာဝတိံသာနတ်ပြည်မှ သိကြားမင်းကိုယ်တိုင် ဦးစီးကာ နတ်အပေါင်းတို့ကို ရွှေတိဂုံဘုရားအား စောင့်ရှောက်စေရန် တာဝန်ပေးအပ်ထားလေသည်။ တာဝန်ပေးအပ်ထားသော နတ်များမှာ တာဝတိံသာနတ်ပြည်မှ နတ်သား ၅ ပါးနှင့် စတုမဟာရာဇ်နတ်ပြည်မှ ဘီလူးအနွယ်ဝင် နတ်ဘီလူး ၁၆ ပါးတို့ကို တာဝန်ပေးအပ်ထားလေသည်။
တာဝတိံသာမှ နတ်သား ၅ ပါးအား ရွှေတိဂုံ၏ အရှေ့၊ အနောက်၊တောင်၊ မြောက် မုဒ်လေးခုတွင် နေရာချထား စောင့်ကြပ်စေ၍ ကျန်တစ်ပါးအား ဘုရား၏ စိန်ဖူးတော်ထိပ်တွင် စောင့်ရှောက်စေလေ၏။
စိန်ဖူးတော်၏ထိပ်တွင် စောင့်ရသောနတ်သည် အထက်ကောင်းကင်ယံမှ အညစ်အကြေးများ မကျစေရန် ဖယ်ရှားပေးရသည့်အပြင် စိန်ဖူးတော်နှင့် အဖိုးတန်ရတနာများကို မသမာသူတို့ ကြံစည်၍ မရအောင် စောင့်ကြပ်ရလေသည်။
မုဒ်လေးခုတွင် စောင့်ကြပ်ရသော နတ်လေးပါးသည်ကား မကောင်းမိစ္ဆာများနှင့် လူမိစ္ဆာတို့ ဘုရားအား လာရောက်မနှောက်ယှက်နိူင်ရန် စောင့်ကြပ်ရလေ၏။ ထို့အပြင် သဘာဝဘေးကြောင့် မပျက်စီးအောင်လည်း ကာကွယ်ပေးရလေ၏။
နတ်ဘီလူး ၁၆ ပါးတို့သည်ကား ဘုရား၏မြေအောက်ရှိ ဘုရားဌာပနာနှင့် မွေတော် ဓာတ်တော်များကို အထူးစောင့်ကြပ်ရလေ၏။ဘုရားဌာပနာအား ဖောက်ထွင်းရန် ကြံစည်သူတို့သည် ရောဂါအမျိုးမျိုး၊ ဘေးအမျိုးမျိုး၊ လက်နက်အမျိုးမျိုးဖြင့် သေပွဲဝင်ကြရလေ၏။ ထို့အပြင် ဘုရားရင်ပြင်ပေါ်ရှိ ဘုရားပိုင်ပစ္စည်းများကိုလည်း စောင့်ရှောက်ရလေ၏။
မြန်မာဘုရင်များလက်ထက်အခါက ပေါ်တူဂီစစ်သားတို့သည့် ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်ရှိ ခေါင်းလောင်းအား လုယူသယ်ဆောင်ကြသော်လည်း ဘုရားအောက်ပိုင်းရှိ မြစ်အတွင်းသို့ရောက်သောအခါ ရေနစ်ပြီး အသေဆိုးဖြင့် သေကြရလေ၏။
ထို့အတူ ဒုတိယ မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်စစ်ပွဲပြီးကာစတွင် အင်္ဂလိပ်စစ် သားများက ရွှေတိဂုံဘုရားမြေအောက်ရှိ ဘုရားဌာပနာ ရွှေ၊ ငွေ၊ ကျောက်၊ သံ၊ ပတ္တမြားတို့ကို တူးယူရန်အတွက် လူအင်အာအများ အပြားသုံးပြီး လှိုင်ခေါင်းများစွာတူး၍ ရှာဖွေကြသော်လည်း မတွေ့ရပဲ အချိန်ကြာမြင့်လာသောအခါ အင်္ဂလိပ်စစ်သားများစွာတို့ အသေဆိုးဖြင့် သေကြရလေသည်။
ထိုအန္တရာယ်မျိုးစုံကြောင့် သိကြားမင်းသည် အလွန်ကြမ်းလှသော နတ်ဘီလူး ၁၆ ပါးကိုသာ တာဝန်ပေးအပ်ကာ စောင့်ရှောက်ထားစေလေသည်။ နောင်ပွင့်တော်မူမည့် အရိမေတ္တယျဘုရား၏ ဓာတ်တော်လည်း ရွှေတိဂုံဘုရားသို့ ထပ်မံထည့်သွင်းဌာပနာရဦးမည်ဖြစ်လေ၏။
သိကြားမင်းကြီး ကိုယ်တိုင်လည်း သာသနာပြုမင်းပေါ်သောအခါ ဘုရားထီးတော်တင်သည့်အချိန်တွင် ရွှေတိဂုံဘုရားအား လာရောက်ဖူးမျှော်ဦးမည် ဖြစ်လေသည်။ထိုမင်းအတွက်အား ဆင်ဖြူတော်သုံးစီး ပေးအပ်မည်ဖြစ်လေသည်။ ထို့အတူ နဂါးမင်းများမှလည်း ဆင်ဖြူတော်လေးစီး ထပ်မံဆက်သမည်ဖြစ်လေ၏။
ဘုန်းတော်ကြီးသော ဘုရားရွှေတိဂုံသည် အဖိုးမဖြတ်နိူင်သော ဘုရားလေးဆူတို့၏ ဓာတ်တော် မွေတော်များရှိခြင်း၊ တန်ဖိုးကြီးသော ရတနာများရှိခြင်း၊ လွန်စွာကြီးမြတ်ခြင်းတို့ကြောင့် နတ်နှင့် ဘီလူးတို့က အထူးစောင့်ကြပ်နေရလေ၏။
ရှတေိဂုံဘုရားသညျ ဘုရားလေးဆူတို့၏ ဓာတျတျောမှတေျောမြားရှိပွီး လှနျစှာတနျခိုးကွီးလှ၏။ ရှေးခတျေမငျးအဆကျဆကျတို့ ကိုးကှယျခဲ့ကွပွီး အဖိုးမဖွတျနိူငျသော ဌာပနာမြားကိုလညျး ထညျ့သှငျးခဲ့ကွလသေညျ။
တာဝတိံသာနတျပွညျမှ သိကွားမငျးကိုယျတိုငျ ဦးစီးကာ နတျအပေါငျးတို့ကို ရှတေိဂုံဘုရားအား စောငျ့ရှောကျစရေနျ တာဝနျပေးအပျထားလသေညျ။ တာဝနျပေးအပျထားသော နတျမြားမှာ တာဝတိံသာနတျပွညျမှ နတျသား ၅ ပါးနှငျ့ စတုမဟာရာဇျနတျပွညျမှ ဘီလူးအနှယျဝငျ နတျဘီလူး ၁၆ ပါးတို့ကို တာဝနျပေးအပျထားလသေညျ။
တာဝတိံသာမှ နတျသား ၅ ပါးအား ရှတေိဂုံ၏ အရှေ့၊ အနောကျ၊တောငျ၊ မွောကျ မုဒျလေးခုတှငျ နရောခထြား စောငျ့ကွပျစေ၍ ကနျြတဈပါးအား ဘုရား၏ စိနျဖူးတျောထိပျတှငျ စောငျ့ရှောကျစလေေ၏။
စိနျဖူးတျော၏ထိပျတှငျ စောငျ့ရသောနတျသညျ အထကျကောငျးကငျယံမှ အညဈအကွေးမြား မကစြရေနျ ဖယျရှားပေးရသညျ့အပွငျ စိနျဖူးတျောနှငျ့ အဖိုးတနျရတနာမြားကို မသမာသူတို့ ကွံစညျ၍ မရအောငျ စောငျ့ကွပျရလသေညျ။
မုဒျလေးခုတှငျ စောငျ့ကွပျရသော နတျလေးပါးသညျကား မကောငျးမိစ်ဆာမြားနှငျ့ လူမိစ်ဆာတို့ ဘုရားအား လာရောကျမနှောကျယှကျနိူငျရနျ စောငျ့ကွပျရလေ၏။ ထို့အပွငျ သဘာဝဘေးကွောငျ့ မပကျြစီးအောငျလညျး ကာကှယျပေးရလေ၏။
နတျဘီလူး ၁၆ ပါးတို့သညျကား ဘုရား၏မွအေောကျရှိ ဘုရားဌာပနာနှငျ့ မှတေျော ဓာတျတျောမြားကို အထူးစောငျ့ကွပျရလေ၏။ ဘုရားဌာပနာအား ဖောကျထှငျးရနျ ကွံစညျသူတို့သညျ ရောဂါအမြိုးမြိုး၊ ဘေးအမြိုးမြိုး၊ လကျနကျအမြိုးမြိုးဖွငျ့ သပှေဲဝငျကွရလေ၏။ ထို့အပွငျ ဘုရားရငျပွငျပျေါရှိ ဘုရားပိုငျပစ်စညျးမြားကိုလညျး စောငျ့ရှောကျရလေ၏။
မွနျမာဘုရငျမြားလကျထကျအခါက ပျေါတူဂီစဈသားတို့သညျ့ ရှတေိဂုံဘုရားပျေါရှိ ခေါငျးလောငျးအား လုယူသယျဆောငျကွသျောလညျး ဘုရားအောကျပိုငျးရှိ မွဈအတှငျးသို့ရောကျသောအခါ ရနေဈပွီး အသဆေိုးဖွငျ့ သကွေရလေ၏။
ထို့အတူ ဒုတိယ မွနျမာ-အင်ျဂလိပျစဈပှဲပွီးကာစတှငျ အင်ျဂလိပျစဈ သားမြားက ရှတေိဂုံဘုရားမွအေောကျရှိ ဘုရားဌာပနာ ရှေ၊ ငှေ၊ ကြောကျ၊ သံ၊ ပတ်တမွားတို့ကို တူးယူရနျအတှကျ လူအငျအာအမြား အပွားသုံးပွီး လှိုငျခေါငျးမြားစှာတူး၍ ရှာဖှကွေသျောလညျး မတှရေ့ပဲ အခြိနျကွာမွငျ့လာသောအခါ အင်ျဂလိပျစဈသားမြားစှာတို့ အသဆေိုးဖွငျ့ သကွေရလသေညျ။
ထိုအန်တရာယျမြိုးစုံကွောငျ့ သိကွားမငျးသညျ အလှနျကွမျးလှသော နတျဘီလူး ၁၆ ပါးကိုသာ တာဝနျပေးအပျကာ စောငျ့ရှောကျထားစလေသေညျ။ နောငျပှငျ့တျောမူမညျ့ အရိမတ်ေတယဘြုရား၏ ဓာတျတျောလညျး ရှတေိဂုံဘုရားသို့ ထပျမံထညျ့သှငျးဌာပနာရဦးမညျဖွဈလေ၏။
သိကွားမငျးကွီး ကိုယျတိုငျလညျး သာသနာပွုမငျးပျေါသောအခါ ဘုရားထီးတျောတငျသညျ့အခြိနျတှငျ ရှတေိဂုံဘုရားအား လာရောကျဖူးမြှျောဦးမညျ ဖွဈလသေညျ။ ထိုမငျးအတှကျအား ဆငျဖွူတျောသုံးစီး ပေးအပျမညျဖွဈလသေညျ။ ထို့အတူ နဂါးမငျးမြားမှလညျး ဆငျဖွူတျောလေးစီး ထပျမံဆကျသမညျဖွဈလေ၏။
ဘုနျးတျောကွီးသော ဘုရားရှတေိဂုံသညျ အဖိုးမဖွတျနိူငျသော ဘုရားလေးဆူတို့၏ ဓာတျတျော မှတေျောမြားရှိခွငျး၊ တနျဖိုးကွီးသော ရတနာမြားရှိခွငျး၊ လှနျစှာကွီးမွတျခွငျးတို့ကွောငျ့ နတျနှငျ့ ဘီလူးတို့က အထူးစောငျ့ကွပျနရေလေ၏။
အတွေးမျိုး ဘယ်တော့မှ မဖြစ်စေနဲ့။
ကျေးဇူးနဲ့တောင် ဆပ်လို့ မကုန်နိုင်သေးဘူးtkw။
စတာတွေ မြင်နေကြတာ။ မိဘတွေကတော့
အဆင်ပြေနေရင် ဝမ်းသာတဲ့ မုဒိတာနှလုံးသား
အစားထိုးမရတဲ့ အဖေတို့အမေတို့အပေါ် ရှိနေတုန်း
တန်ဘိုးထားပါ။ ဘယ်တော့မှ တန်းမညှိပါနဲ့။
ဘယ်တော့မှလည်း မငြိုငြင်ပါနဲ့။ မရှိတော့မှ
(ဤစာစုဖြင့် အမေများကို ဂုဏ်ပြုပါသည်။)
#TKW ( 23 Jan 2019 )
အတှေးမြိုး ဘယျတော့မှ မဖွဈစနေဲ့။
ကြေးဇူးနဲ့တောငျ ဆပျလို့ မကုနျနိုငျသေးဘူးtkw။
စတာတှေ မွငျနကွေတာ။ မိဘတှကေတော့
အဆငျပွနေရေငျ ဝမျးသာတဲ့ မုဒိတာနှလုံးသား
အစားထိုးမရတဲ့ အဖတေို့အမတေို့အပျေါ ရှိနတေုနျး
တနျဘိုးထားပါ။ ဘယျတော့မှ တနျးမညှိပါနဲ့။
ဘယျတော့မှလညျး မငွိုငွငျပါနဲ့။ မရှိတော့မှ
(ဤစာစုဖွငျ့ အမမြေားကို ဂုဏျပွုပါသညျ။)
တောင်စောင့်နတ်တို့ ဆိုတာ ရှိတယ်။
Duty ချထားလို့ စောင့်တာတော့
မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်အိမ်ကို အမှီပြုပြီး
အဲဒါကိုပဲ အိမ်စောင့်နတ်လို့ ခေါ်တာ။
ဝါသံ ပဏ္ဍိတဇာတိယော” တဲ့။
သူတို့မှာ ဘုန်းတန်ခိုးတွေ တက်တယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အကောင်းချည်းပဲ တွေ့တယ်။
အကြင်နာတွေ မေတ္တာတွေ ပိုပြီးတော့
#ဘုရားဆွမ်းတော်တင်၊ ဆီမီး၊ ပန်း၊
အိမ်စောင့်နတ်တို့ ဘာတို့ကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး
ပြန်လည်မျှဝေခြင်း၊ share ခြင်းဖြင့်
တောငျစောငျ့နတျတို့ ဆိုတာ ရှိတယျ။
Duty ခထြားလို့ စောငျ့တာတော့
မဟုတျဘူး။ ကိုယျ့အိမျကို အမှီပွုပွီး
အဲဒါကိုပဲ အိမျစောငျ့နတျလို့ ချေါတာ။
ဝါသံ ပဏ်ဍိတဇာတိယော” တဲ့။
သူတို့မှာ ဘုနျးတနျခိုးတှေ တကျတယျ။
ပုဂ်ဂိုလျဟာ အကောငျးခညျြးပဲ တှတေ့ယျ။
အကွငျနာတှေ မတ်ေတာတှေ ပိုပွီးတော့
#ဘုရားဆှမျးတျောတငျ၊ ဆီမီး၊ ပနျး၊
အိမျစောငျ့နတျတို့ ဘာတို့ကို ဖိတျချေါပွီး
ပွနျလညျမြှဝခွေငျး၊ share ခွငျးဖွငျ့
ပရိသတ်ကြီးရေ…ဝေဠုကျော်ကတော့ ကိုဗစ်ရောဂါ ကူးစက်မှုမြင့်တက်နေတဲ့ ကာလ တွေမှာ ပြည်သူတွေ လိုအပ်တဲ့ အောက်ဆီဂျင်များ လူဒါန်းပေးခဲ့သလို တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေလည်း ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေ လုပ်ဆောင် ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ အ ပြင် လတ် တ လော ကာလ တွေ မှာ အကြောင်းအ မျိုးမျိုးကြောင့် စားဝတ် နေရေးအတွက် ခက်ခဲ နေကြတဲ့ မိသားစု တွေကိုလည်း လိုအပ်နေတာတွေကို ကူညီလှူဒါန်းမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုလည်း အသက် ကြီးမှ ပင်ပင်ပန်းပန်း
ဈးရောင်းကာ ဘဝ ကို ရုန်းကန် နေရတဲ့ ဘိုးဘွားတွေ အဖြစ်ကို စိတ် မကောင်းစွာ ပြောပြရင်း ကူညီထောက် ပံ့ပေးမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ် ။ဈေးရောင်းနေတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် ဆန် ၊ ဆီ ၊ ကြက် သွန် စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ အလှူငွေလေးတွေကို နိုင်သလောက် လှူခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။ဒီလို လှူဒါန်းရင်း သူတို့ တွေရဲ့ စိတ်မ ကောင်းစ ရာ အဖြစ် တွေကို လည်း ” ကိုယ်သွားနေကျ ဈေးထဲ က ဝယ်ပြီးအား ပေးနေကျ အချဉ်ပေါင်းတို့ အသီး လေးတွေ ရောင်းတယ့်
အ ဖွား အသက်က ၆၇နှစ် အဖိုးက ၆၅နှစ် ဆိုက်ကားနင်းပါတယ်။အိမ်မှာ အမေ ကြီးက အသက် ၉၀ ရှိပါ သေးတယ်။ အ သက် အ ရွယ် ရလာပေမယ့် ဘဝကို ကြိုးစားရုန်းကန်ရင်း အမေအို ကို လုပ်ကြွေးတုန်း။အ ချဉ် ပေါင်းရောင်း တယ် အဖွားက ကျမ်းမာရေးက မကောင်းလှ တော့ဖူး။ အသီးတွေ ကို မခွာနိူင် တော့ဖူး။ အ ဖွားတို့အတွက် ဆန် ဆီ ကြက် သွန် စားနပ် ရိက္ခာနှင့် အလှူ ငွေ လေး နိူင်သလောက် ယူသွားပြီး ဈေးသွားရင်း လှူပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့လည်း
ထမီ အသစ် လေးတွေ ယူသွားရင်း လှူ ပေးပါအုံးမယ် ” ရေးသားထားရာ ဖတ်ပြီး စိတ် မ ကောင်းဖြစ်မိ ပါ တယ် ။ ဝေဠုကျော်ရဲ့ အလှူလေးကို ဝေမျှပေးရင်း အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးလိုက် ရပါ တယ်နော်။ဖတ်ရှူ့ ပေးတဲ့ ပ ရိသတ် ကြီးလည်းပျော် ရွှင်သော နေ့ရက် များကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ပါ စေနော်။credit
အဆငျ့မွငျ့ ဗို လျ ခြုပျကွီးတဈဦးရဲ့သားက သူမအားသိနျး၁၈၀ ဖွငျ့ ဟျောတယျချေါလို့ အကွီးကယျြ ပှဲကွမျးနတေဲ့ ပထရဈရှာ
ဒီလိုအချိန်မှာ သိန်း (၁၈၀) ပေးပြီး ဟော်တယ် အတင်းလာခိုင်းတဲ့ အကြောင်း ပြောပြ လာတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာ…
ပရိသတ် ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးေ ချာလေး ပတ်ထရစ်ရှာ ကတော့ ဗီဒီယိုဇာတ် ကားေ တွကတစ်ဆင့် အနုပညာ လမ်းကြော င်းထက်ကို လျှောက်လှ မ်းလာခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်အားပေးမှု နဲ့ အချိန်ခဏလေး အတွင်း အောင်မြင်မှုတွေကို ရရှိခဲ့တဲ့ သူမက ရုပ်ရှင် ဇာတ် ကားတွေ အပြင်
photo shooting တွေကိုလည်း လက်ခံရိုက် ကူးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။အခုလို မတည်ငြိမ်သေးတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာတော့ ပစ်ထရစ်ရှာက အနုပညာလှု ပ်ရှားမှုတွေကို ခေတ္တ ရပ်နားထားပြီး ပြည်သူတွေ နဲ့အတူ တစ်သားတည်းရပ်တည်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။လမ်းပေါ်ထွက်ကာ ပြည်သူေ တွနဲ့အတူ ရပ်တည်နေတဲ့ သူမကို လူတ စ်စုက နာမည် ဖျက်ဖို့ကြိုး စားနေတာဖြစ်ပြီးမကြာသေးတဲ့ နာရီပိုင်းအချိ န်လောက်က လူမှု ကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ်အကောင့်မှာ စာသားလေး အ
ချို့ရေးသားတ င်ပေးလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ ပ တ်ထရစ်ရှာက ” နေ့လည် ၃:၀၀ နာရီ က ကျွန်မ post တစ်ခု တင်ဖို့အတွက် အလုပ်ရှု ပ်နေတုန်းမှာရင်းနီးတဲ့ အသိတစ်ေ ယာက်က တစ်ဆင့် ဖုန်းဆက်လာတယ် …. နာမည်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲ့ သားတစ်ေ ယာက်က ကျွန်မကို ကြိုက်လို့ သိန်း ၁၈၀ ပေးမယ်ဆိုပြီး မိတ်ဆ က်ခိုင်းတယ်တဲ့ ရှင် Hotel နာမည်ပါ ထည့်ပြော လိုက်သေးသတဲ့ အကြံပက်စက်ချက်နော် ဘယ်လောက်ယုတ်မာချင်နေလဲဆိုတာ တွေးသြာ ကည့်ေ
တာ့.ကျွန်မတို့ကို စောက်မြင်က ပ်နေတယ် ဆိုတာ ကောင်းကောင်းကြီး နားလည်သိရှိပြီးသားပါ ….ဘာအကြံအစည် ရှိတယ် ဘာလိုချင်တယ် ဆိုတာ ကိုလည်း သိပါတယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ ကျမတို့က ရှင်တို့ လိုတော့ မချမ်းသာပါဘူး။ကျွန်မတို့တွေ ဒီကာလမှာ အလုပ် မရှိတော့ ဝင်ငွေလုံးဝမရှိ ထွက်ငွေ သာရှိပါတယ်..ဒါပေမယ့်လေ ခြွေခြွေတာတာလေးနဲ့ နေနေတယ် ရှိတာပဲ ဝတ်မယ် ရှိတာနဲ့ စားမယ် မပြောရဲမဆိုရဲအပေါက်ပိတ်ေ နမယ့် သြူ ဖစ်အောင်တော့ ဇာတ်လာ မသိမ်းသွ
င်းနဲ့ sorry ပဲ ” ဆိုပြီး ရေးသားတင်ပေးလာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။တမင်ကြံစည်ပြီး နာမည်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ သူတွေရှိကြောင်းပရိသတ်တွေ သိရှိစေဖို့အတွက် ပတ်ထရစ်ရှာရဲ့စာသားလေးတွေနဲ့ ပုံအချို့ကို ပြန်လည်ေ ဝမျှပေးလိုက် ပါတယ်နော်။
လောကမှာသငျ့အတှကျ သငျ့လောကျယုံကွညျအားကိုးရတဲ့သူ ဘယျသူမှမရှိပါဘူး
သင့်ကို ဘယ်သူမှ ဂရုမစိုက်တဲ့အခါ သင် အားမငယ်ပါနဲ့။ အားငယ်တတ်တဲ့ သင့်ရဲ့စိတ်တွေက သင့်ကို ပိုပြီး သိမ်ငယ်စေပါတယ် ။သင့်ကို ဂရုမစိုက်တဲ့ သူတွေကို သင် ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ။ သူတို့ကြောင့် သင်ဟာကိုယ့်ဘဝကို ရုန်းကန်တတ်လာတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားကိုးတတ်လာတယ်။
သူတို့ကြောင့် သင် အတွေ့အကြုံတွေရလာတယ်။ သင်ခန်းစာတွေ ရလာတယ်။ သူများကို အားကိုးချင်တဲ့ စိတ်တွေပျောက်လာတယ်။သင့်ဘဝမှာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့
ထင်ထားတာတွေ ဖြစ်လာတယ်။ သင် သူများဆီက မျှော်လင့်နေရတဲ့ စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေ နည်းလာတယ်။သင့်ကြောင့် သူတစ်ပါး စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေနည်းလာတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အားမငယ်ပါနဲ့။ မသိမ်ငယ်ပါနဲ့။လောကမှာ သင့်အတွက် သင့်လောက် ယုံကြည်အားကိုးရတဲ့သူ ဘယ်သူမှ မရှိပါဘူး။ သင့်ကိုယ်သာသင် ကောင်းကောင်း အားကိုးကူညီပါ။ သင့်ရဲ့ အဆင်မပြေမှုတွေက မကြာခင် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ဘဝသစ် စပါ။ ပြန်မရတဲ့ အတိတ်တွေကို တမ်းတမနေပါနဲ့။ ရင်နာစရာေ
တွကို ထွေးပွေ့မထားပါနဲ့။ နာကျင်စရာတွေကို ပစ်ထုတ်လိုက်ပါ။မဖြစ်နိုင်တာတွေကို မမျှော်လင့်ပါနဲ့။ မရနိုင်တာတွေကို တောင်းတနေရင်း ဘဝအပျက်ခံတော့မလို့လား…? လောကကြီးကို အရှုံးပေးတော့မလို့လား..?လောကဓံတရားကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ကြောက်ရွံ့နေပြီလား…? မင်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။ နာကျင်စရာတွေကို မင်း မေ့နိုင်ပါတယ်။တစ်လောကလုံးက မင်းကို ပစ်ပယ်ထားရင်တောင် မင်းကိုယ်မင်းတော့ ချစ်တက်ရမယ်။ မင်းဘဝကို ပြုပြင် ပြောင်းလဲတက်ရမယ်။ လူတိုင်းက အမှားနဲ့မ
ကင်းကြပါဘူး။ မှားမှန်းသိလို့ နောက်ပြန်လှည့်ပြီး ပြောင်းလဲရမှာက မင်းတာဝန်ပဲ။မှားခဲ့တဲ့ အမှားတွေကို ခေါက်ထားလိုက်ပါ။ လမ်းမှန်လျှောက်ပြီး ဘဝသစ် ပြန်စပါ။ မနက်ဖြန်ကစလို့ မင်းဘဝကို အရင်ကထက်ပိုပြီး ကောင်းမွန်အောင်နေပါ။နေ့ရက်တိုင်းမှာ ဘဝသစ်နဲ့ ပျော်ရွှင်အောင်နေပါ။ ငိုခဲ့တဲ့အချိန်တွေ ကုန်လွန်ပြီမို့ ပျော်ရွှင်ရမဲ့ အလှည့်မှာ ဘဝသစ်နဲ့ ဖြတ်သန်းပါ။Credit: Original Writer
သငျ့ကို ဘယျသူမှ ဂရုမစိုကျတဲ့အခါ သငျ အားမငယျပါနဲ့။ အားငယျတတျတဲ့ သငျ့ရဲ့စိတျတှကေ သငျ့ကို ပိုပွီး သိမျငယျစပေါတယျ ။သငျ့ကို ဂရုမစိုကျတဲ့ သူတှကေို သငျ ကြေးဇူးတငျလိုကျပါ။ သူတို့ကွောငျ့ သငျဟာကိုယျ့ဘဝကို ရုနျးကနျတတျလာတယျ။ ကိုယျ့ကိုကိုယျ အားကိုးတတျလာတယျ။သူတို့ကွောငျ့ သငျ အတှအေ့ကွုံတှရေလာတယျ။ သငျခနျးစာတှေ ရလာတယျ။ သူမြားကို အားကိုးခငျြတဲ့ စိတျတှပြေောကျလာတယျ။သငျ့ဘဝမှာ မဖွဈနိုငျဘူးလို့ ထငျထားတာ
တှေ ဖွဈလာတယျ။ သငျ သူမြားဆီက မြှျောလငျ့နရေတဲ့ စိတျဆငျးရဲမှုတှေ နညျးလာတယျ။သငျ့ကွောငျ့ သူတဈပါး စိတျဆငျးရဲမှုတှနေညျးလာတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အားမငယျပါနဲ့။ မသိမျငယျပါနဲ့။လောကမှာ သငျ့အတှကျ သငျ့လောကျ ယုံကွညျအားကိုးရတဲ့သူ ဘယျသူမှ မရှိပါဘူး။ သငျ့ကိုယျသာသငျ ကောငျးကောငျး အားကိုးကူညီပါ။ သငျ့ရဲ့ အဆငျမပွမှေုတှကေ မကွာခငျ အဆငျပွသှေားပါလိမျ့မယျ။ဘဝသဈ စပါ။ ပွနျမရတဲ့ အတိတျတှကေို တမျးတမနပေါနဲ့။ ရငျနာစရာ
တှကေို ထှေးပှမေ့ထားပါနဲ့။ နာကငျြစရာတှကေို ပဈထုတျလိုကျပါ။မဖွဈနိုငျတာတှကေို မမြှျောလငျ့ပါနဲ့။ မရနိုငျတာတှကေို တောငျးတနရေငျး ဘဝအပကျြခံတော့မလို့လား…? လောကကွီးကို အရှုံးပေးတော့မလို့လား..?လောကဓံတရားကို ရငျဆိုငျဖို့ ကွောကျရှံ့နပွေီလား…? မငျး လုပျနိုငျပါတယျ။ နာကငျြစရာတှကေို မငျး မနေို့ငျပါတယျ။တဈလောကလုံးက မငျးကို ပဈပယျထားရငျတောငျ မငျးကိုယျမငျးတော့ ခဈြတကျရမယျ။ မငျးဘဝကို ပွုပွငျ ပွောငျးလဲတကျရမယျ။
လူတိုငျးက အမှားနဲ့မကငျးကွပါဘူး။ မှားမှနျးသိလို့ နောကျပွနျလှညျ့ပွီး ပွောငျးလဲရမှာက မငျးတာဝနျပဲ။မှားခဲ့တဲ့ အမှားတှကေို ခေါကျထားလိုကျပါ။ လမျးမှနျလြှောကျပွီး ဘဝသဈ ပွနျစပါ။ မနကျဖွနျကစလို့ မငျးဘဝကို အရငျကထကျပိုပွီး ကောငျးမှနျအောငျနပေါ။နရေ့ကျတိုငျးမှာ ဘဝသဈနဲ့ ပြျောရှငျအောငျနပေါ။ ငိုခဲ့တဲ့အခြိနျတှေ ကုနျလှနျပွီမို့ ပြျောရှငျရမဲ့ အလှညျ့မှာ ဘဝသဈနဲ့ ဖွတျသနျးပါ။Credit: Original Writer
ယောက်ခမဖွဈသူနဲ့ ပတျသကျပွီး မဟုတျမမှနျတဲ့သတငျးတှေ ထှကျနတောကွောငျ့ ဒေါသတှေ ထှကျပွီး ပွနျဖွရှေငျးလိုကျတဲ့ မငျးမျောကှနျးရဲ့ဇနီး
ပရိသတ်ကြီးရေ မနေ့ညက လူမှုကွန်ယက်မှာ သတင်းတစ်ခု ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်နော်။ ဒါကတော့ သရုပ်ဆောင်မင်းသားကြီး ဇင်ဝိုင်းတစ်ယောက် မနေ့ညက ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတယ်ဆိုပြီး သတင်းတက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ ဒီသတင်းကြားကြားချင်းမှာတော့ ပရိသတ်များမှ ဦးဇင်ဝိုင်းအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်။သတင်းတွေ ထွက်ထွက်ပြီး မကြာခင်မှာဘဲ ဦးဇင်ဝိုင်းရဲ့ မိသားစုဘက်မှာ ကောလဟလသတင်းမှားတွေ
သာဖြစ်ကြောင်း ပြန်ဖြေရှင်းထားပါသေးတယ်နော်။ သရုပ်ဆောင် မင်းမော်ကွန်းရဲ့ ဇနီးမှလည်း ဒီကိစ္စကို သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်တွင် ရှင်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ ဒါကတော့ ယောက္ခမဖြစ်သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မဟုတ်မမှန်တဲ့သတင်းတွေ ထွက်နေတာကြောင့် ဒေါသတွေ ထွက်ပြီး ပြန်ဖြေရှင်းလိုက်ပါတယ်နော်။” ကျွန်မ ​လေ FB မှာ​တော်ရုံတန်ရုံ မဟုတ် လွန်လွန်ကျူးကျူး ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ သတင်း​တွေ ​တက်လာရင် ဖြေရှင်းခဲပါတယ်။ အခု​လေ ကိုယ်နဲ့ အ​ဝေး ​ရောက်​နေတဲ့
အချိန် ကိုယ့် အ​ဖေ ဦးဇင်ဝိုင်း သတင်း​တွေ တက်လာတာ မှန်တာလဲမဟုတ် ​ခေါင်းစဉ် လိုရာစွဲတပ်ပြီး page like များပြီး​ရော ဆိုတဲ့ media အမည်ခံ​ပေါက်လွှတ်ပဲစား page များ သတင်းဖြစ် လူကြိုက်များပြီး​ရော ဆိုတဲ့ pageများအား လုံး ​စောက်ရှက်​လေးများရှိကြပါဦးလို့ မြန်မာပြည် ကလူ​တွေ သတင်းအမှန်ရ​အောင် ပဲ အရင် လုပ်ကြပါ လို့ နင်တို့လဲ ​ ​င​ပေါ​တွေ” ဆိုပြီးရေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်။
ပရိသတျကွီးရေ မနညေ့က လူမှုကှနျယကျမှာ သတငျးတဈခု ထှကျပျေါလာခဲ့ပါတယျနျော။ ဒါကတော့ သရုပျဆောငျမငျးသားကွီး ဇငျဝိုငျးတဈယောကျ မနညေ့က ဒုတိယအကွိမျမွောကျ ဖမျးဆီးထိနျးသိမျးခံခဲ့ရတယျဆိုပွီး သတငျးတကျလာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျနျော။ ဒီသတငျးကွားကွားခငျြးမှာတော့ ပရိသတျမြားမှ ဦးဇငျဝိုငျးအတှကျ စိတျမကောငျးဖွဈနခေဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျနျော။သတငျးတှေ ထှကျထှကျပွီး မကွာခငျမှာဘဲ ဦးဇငျဝိုငျးရဲ့ မိသားစုဘကျမှာ ကောလဟလသတငျး
မှားတှသောဖွဈကွောငျး ပွနျဖွရှေငျးထားပါသေးတယျနျော။ သရုပျဆောငျ မငျးမျောကှနျးရဲ့ ဇနီးမှလညျး ဒီကိစ်စကို သူမရဲ့လူမှုကှနျယကျတှငျ ရှငျးထားတာ ဖွဈပါတယျနျော။ ဒါကတော့ ယောက်ခမဖွဈသူနဲ့ ပတျသကျပွီး မဟုတျမမှနျတဲ့သတငျးတှေ ထှကျနတောကွောငျ့ ဒေါသတှေ ထှကျပွီး ပွနျဖွရှေငျးလိုကျပါတယျနျော။” ကြှနျမ ​လေ FB မှာ​တျောရုံတနျရုံ မဟုတျ လှနျလှနျကြူးကြူး ကိုယျ့မိသားစုနဲ့ ပါတျသတျတဲ့ သတငျး​တှေ ​တကျလာရငျ ဖွရှေငျးခဲပါတယျ။
အခု​လေ ကိုယျနဲ့ အ​ဝေး ​ရောကျ​နတေဲ့အခြိနျ ကိုယျ့ အ​ဖေ ဦးဇငျဝိုငျး သတငျး​တှေ တကျလာတာ မှနျတာလဲမဟုတျ ​ခေါငျးစဥျ လိုရာစှဲတပျပွီး page like မြားပွီး​ရော ဆိုတဲ့ media အမညျခံ​ပေါကျလှတျပဲစား page မြား သတငျးဖွဈ လူကွိုကျမြားပွီး​ရော ဆိုတဲ့ pageမြားအား လုံး ​စောကျရှကျ​လေးမြားရှိကွပါဦးလို့ မွနျမာပွညျ ကလူ​တှေ သတငျးအမှနျရ​အောငျ ပဲ အရငျ လုပျကွပါ လို့ နငျတို့လဲ ​ ​င​ပေါ​တှေ” ဆိုပွီးရေးထားတာ ဖွဈပါတယျနျော။